Isebenziseka kunoma yiluphi uhlobo: kwizinzuzo nezindlela zokudla u-anyanisi kushukela > Ukudla ngesifo sikashukela
Izici zokupholisa anyanisi zazaziwa ngisho nakubalaphi basendulo, ababesizwa ukugula okuningi ngosizo lwalo.
Umuthi wanamuhla awukuphiki izinzuzo zalesi siko semifino emzimbeni, ngakho-ke abelaphi bendabuko bavame ukuletha emarejimeni okwelashwa yezimo ze-visceral.
Inethiwekhi imvamisa kufanele ihlangane nemibuzo ngokusetshenziswa kwemifino, ikakhulukazi, kungenzeka ukuthi idle u-anyanisi onesifo sikashukela sohlobo 2. Ngokusho kososayensi, u-anyanisi ohlobo lwe-2 yesifo sikashukela akukhona nje ukuthi ungadla, kepha kudingekile kakhulu.
Lesi sitshalo sezimpande sicetshiswe ngezinto eziwusizo eziphila ngokusebenza sinomphumela omuhle kuma-pancreas, silinganisa amazinga kashukela egazini futhi sinciphise ukubonakaliswa kwe-hyperglycemia, kuvikele ngempumelelo ukukhula kwezinkinga zesifo.
Ekhuluma ngezinto ezizuzisayo zika-anyanisi, umuntu ngeke anake kuphela ukwakheka kwamakhemikhali.
Cishe wonke amavithamini akhona aqukethe isitshalo sezimpande.
Okubaluleke ngokukhethekile kwabanesifo sikashukela yi-vithamini PP, evamile ukuhlushwa ushukela ne-cholesterol egazini, futhi elawula ukukhiqizwa kwamandla.
Ngaphezu kwezinto ezisetshenziswayo, imifino iqukethe izinto eziningi ezincane kanye nama-macro, ikakhulukazi, i-iron, i-zinc, i-calcium, i-potassium, iodine kanye ne-fluorine, umlotha nabanye. Imifino ingumthombo obalulekile we-fiber nama-carbohydrate, futhi inothile nge-pectin, isitashi nama-organic acid.
Ukwakheka okuhlukile kwezinhlamvu kunikela ngenani elikhulu lezinto zokuphulukisa, phakathi kwazo kukhona:
imiphumela ye-antiviral, antimicrobial, anthelmintic ne-antifungal,
umphumela omuhle kakhulu wokukopisha
amandla okwehlisa ushukela wegazi futhi uvikele ukukhula kwesifo sikashukela,
ukuhlinzeka komphumela we-antitumor omenyezelwe,
amandla okwehlisa umfutho wegazi ophakeme,
ukukhulisa i-libido, ukukhuphuka kokujuluka,
ukusiza ekunciphiseni isisindo kanye nokwenza inqubo ejwayelekile emzimbeni,
ukuhlanza kwesibindi okusebenzayo, ukuvuselelwa kwamaseli obuchopho, kuqinisa udonga lwe-vascular.
Ginkomba ye-lycemickungumqondo ongathola ukuthi ukudla okuthile kukuthinta kanjani okuqukethwe ushukela egazini lomuntu.
Isinkomba esibalulekile sabanesifo sikashukela kanye nabantu ababekezelelekile ukubekezelela ushukela, ngoba kukuvumela ukuthi udale ukudla okwamukelekayo okwenziwa nsuku zonke okungabangeli ukukhulu kwesifo.
Umkhiqizo ngamunye wokudla unenkomba yakhe ye-glycemic. Inkomba ingahluka ngokuya ngezinhlobo zendlela yokupheka, uhlobo lwezakhi, izinhlobo zemifino nokunye.
Ngakho-ke, nge-anyanisi, inkomba ye-glycemic yile:
Inkomba ye-glycemic ye-anyanisi ebilisiwe nayo iphansi kakhulu - amayunithi ayi-15 kuphela.
Lesi yisinkomba esiphansi impela, esibonisa inzuzo yemifino kushukela.
Noma yimuphi u-anyanisi unezakhiwo eziwusizo, noma ngabe unhlobonhlobo nendlela yokulungiselela. Namuhla, imifino ivame ukungezwa cishe kuzo zonke izitsha ze-cuisine zikazwelonke: isobho, izitsha zenyama, amasaladi nokunye.
Ngaphezu komphumela ozuzisayo ezingeni le-glycemia, u-anyanisi uyindlela eyingqayizivele yokulwa nokutheleleka ngegciwane, usinxephezela ngokuphelele ukusweleka kwamavithamini ngesikhathi sokukhulelwa futhi uvimbela ukukhula kwezimila ezinomdlavuza.
Isobho sika-anyanisi wasendulo
I-anyanisi ngezinhloso zokwelapha ingathathwa ingavuthiwe, ibhakiwe, kanye nangendlela ye-tincture noma ujusi omusha. I-tincture esekelwe kwimifino ilungiswa ngokufaka imifino eyi-100 g yemifino enganqunyiwe kumalitha ama-2 we wayini ebomvu eyomile amasonto amabili.
Ngemuva kwenkathi yesikhathi esinqunyiwe, i-cocktail yokuphulukisa eyenziwe ngomumo ingathathwa. Umthamo onconyiwe ngu-15 g ngemuva kokudla okuyinhloko. Ngenxa yokuqukethwe kotshwala, umkhiqizo akufanele unikezwe izingane.
Umuthi wendabuko unikeza izindlela eziningi zokuqeda ushukela ngosizo lwama-bulbs.
Indlela yokuqeda ukubonakaliswa kwe-hyperglycemia ngokuthatha i-decoction ye-anyanisi ikhasi ithola ukuthandwa.
Ukuyilungiselela, udinga ukuthulula amagremu ambalwa wemishini eluhlaza engagcwele ngengilazi yamanzi abilayo futhi ugcizelele kuze kuphole ngokuphelele. Umkhiqizo ophelile unconywa ukuthatha ingxenye yesithathu yengilazi kathathu ngosuku.
Ngingadla i-anyanisi eluhlaza kashukela? Njengoba inkomba ye-glycemic ye-anyanisi eluhlaza ingamayunithi ayi-15 kuphela, lo mkhiqizo wokudla ungaba khona kalula ekudleni kweziguli ezinezinhlobo ezahlukahlukene ze-hyperglycemia.
Ukusetshenziswa kwe-anyanisi ebhakwe
Anyanisi onesifo sikashukela awusizo nganoma iyiphi indlela. Kepha yi-imifino ebhakiwe ebilwisa lesi sifo ngempumelelo, ngoba iqukethe inani elikhulu lesibabule, elikhuthaza ukwenziwa komsebenzi we-endocrine kanyuselezi futhi lenze ukukhiqizwa kwe-insulin.
Ngaphezu kwalokho, imifino ebhakiwe ivuselela umsebenzi wezindlala zokudla ngamazinga ahlukahlukene futhi igculisa ogulayo ngamavithamini namaminerali amaningi awusizo.
Kunezindlela ezimbili eziphambili zokubhaka u-anyanisi, okukuvumela ukuthi ulondoloze kuzo zonke izinto eziwusizo:
u-anyanisi wokubhaka epanini,
ukubhaka imifino kuhhavini.
Ukugcoba u-anyanisi epanini akufanele kuhlanganiswe nokuthosa kwalo. Imifino kufanele ibhakwe. Ngaphandle kwalokho, kuzoba nokuncane okuzuziwe ngakho. Amabhuleki alungiselelwe epanini kufanele adliwe ekuseni amasonto amane.
Njengoba imiphumela yocwaningo oluningi ikhombisa, le nkathi yanele ngokwanele ukwenze ushukela wegazi futhi yenze ngcono kakhulu isimo somuntu.
Amabhuleki aphekwe kuhhavini anconywa ukuthi adliwe kathathu ngosuku ngaphambi kokudla okuyinhloko. Inkambo yokwelashwa okunje ayidluli amasonto amane. Ngemuva kokuphathwa okunjalo nokubambelela ekudleni okukhethekile okuhloswe ngakho ukuqeda ama-carbohydrate ekudleni, umphumela uhlala unyaka.
Uma kungekho komzimba kanye ne-contraindication kusetshenziswa u-anyanisi, singasetshenziswa ngobuningi obukhulu.
Ngokucatshangelwa ukuthi imifino ikhona cishe kuzo zonke izitsha ezisetshenziswa yizakhamuzi zakithi nsuku zonke kusuka etafuleni lasekhishini, ochwepheshe bahlunge isilinganiso esivunyelwe nsuku zonke sezilimo zezimpande.
Yileli nani le-anyanisi elizosiza ukugcoba umzimba womuntu ngezinto ezibalulekile futhi alikwazi ukubanga imiphumela emibi.
Imvamisa yansuku zonke ye-anyanisi eluhlaza icishe ibe amagremu ayi-100 ngosuku (lokhu kucishe kube yingxenye yengilazi).
Njenganoma yimuphi omunye umkhiqizo wokudla, u-anyanisi ohlobo 2 sikashukela unemiphumela yawo eyingozi. Ngokwemvelo, azibalulekile, kepha kufanele zikhunjulwe ngaphambi kokuqala ukwelashwa ngosizo lwezimpande zezitshalo.
Imiphumela emibi ye-anyanisi ifaka:
umphumela olimazayo kuma-microflora amathumbu amakhulu (uma usebenzisa amaqhubu amaningi), okuyimbangela yokuthuthukiswa kwe-dysbiosis kanye nokwehla okuyingxenye kokungazinzi komzimba,
umphumela ololisayo kulwelwesi lwama-mucous, olubonakala ngokubonakala kwezilonda, izindawo zokuvuvukala, i-asthma,
amandla okuvimbela ezinye izinqubo ohlelweni lwezinzwa oluphakathi futhi zivuse ukozela.
I-anyanisi nesifo sikashukela sohlobo 2 azihambelani nale mibiko elandelayo:
i-pancreatitis eyingozi, lapho izinto ezakha imifino zingaba nomthelela ekuqhubekeni kwesifo,
i-peptic ulcer noma i-gastritis esigabeni esibuhlungu,
ukungabekezelelani ngakunye ezingxenyeni ezithile zesitshalo semifino.
Ngingayidla i-garlic no-anyanisi yeshukela? Ungadla u-anyanisi wesifo sikashukela, njengoba sesithole. Futhi izinzuzo nokulimala kwegalikhi kwabanesifo sikashukela kungatholakala kule vidiyo:
Ukufingqa, kungaphawulwa ngokuzethemba ukuthi umkhiqizo wokudla onjengama-anyanisi awugcini nje ngokubangela ukwanda koshukela wegazi ezigulini ezine-hyperglycemia, kodwa futhi kunomthelela ekujuleni kwale nkomba. I-anyanisi nohlobo lwe-2 mellitus yesifo sikashukela kuyinhlanganisela enhle kakhulu engathuthukisa isimo esivamile seziguli, kuvimbele ukuthuthukiswa kwezinkinga zesifo emzimbeni wabo futhi kunciphise umthamo we-insulin wabashukela abanesifo sikashukela.
Kungani u-anyanisi obhakwe ulunge kakhulu kushukela
Yikuphi ukulandelela element ku-anyanisi kusiza ukunciphisa ushukela. Ukuthi amamaki angakanani. Mangakhi ama-carbohydrate kulo mkhiqizo. Ingadliwa kangaki ngosuku, nokuthi ungayipheka kanjani ukuze uthole okuningi kuyo. Amaresiphi wesitsha esiphundu esimnandi kakhulu esibhakiwe ku-anyanisi esitsheni.
Akukhona-ke ukuthi abantu bavame ukuzwa ukunambitheka okubunjiwe kwe-anyanisi kusaladi noma bakudle ngesobho elimnandi. Umzimba wethu udinga amavithamini, futhi kulo mkhiqizo - izinto eziningi ezilusizo. Lesi sitshalo esiyingqayizivele esinezindawo zokupholisa. Eminyakeni engama-40 edlule, abantu basebenzisa lo mkhiqizo njengomuthi. Wasiza ngezifo eziningi. Wayiswa emikhunjini ukuze kunqandwe i-scurvy ohambweni olude. Namuhla izinzuzo zalo azinakuphikwa futhi zifakazelwe ngokwakhiwa kwamakhemikhali. Embuzweni wokuthi kungenzeka yini ukuthi udle u-anyanisi kushukela, impendulo ithi yebo - yebo! I-anyanisi ebhakiwe yesifo sikashukela inenzuzo ikakhulukazi.
Yini ukusetshenziswa kwalomkhiqizo?
Amafutha abalulekile anika lesi sitshalo ukunambitheka okumunyu. Kepha mancane kakhulu u-anyanisi kunezinsalela zemvelo ezahlukahlukene. Futhi ngaphandle kwalokhu, akanakuthengwa.
Kungani le imifino ilusizo kangaka:
Kuthuthukisa ukuqina kwemizwa.
Inamavithamini amaningi asiza ukuthuthukisa ukungatheleleki komzimba.
I-anyanisi ngohlobo 2 sikashukela inenzuzo ngenxa yokuqukethwe kwe-allicin. Le ngxenye inciphisa isidingo somzimba se-insulin yokufakelwa. Lokhu kwenzeka ngoba ukwanda kwezinhlelo zezitho nezitho zomzimba kule hormone kukhuphuka.
I-anyanisi ithinta abantu ngokulinganayo abanesifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2. I-Endocrinologists incoma ukuphinda kudle kabusha ukudla kwansuku ngalo mkhiqizo. Lesi sitshalo sifakiwe kwimenyu yokudla yenombolo 9, njengesengezo esiwusizo kumakhanathi nakamasaladi. Labo abangalithandi iphunga elithile ne-aftertaste yalo mkhiqizo bangadla amaleki. Ngemuva kwayo akukho phunga elingajabulisi.
Yini izinhlobo eziwusizo kakhulu
Inkomba ye-glycemic yazo zonke izinhlobo iyafana: 15. Kepha izinhlobo ezahlukahlukene zalo mkhiqizo ziyehluka kokuqukethwe kwekhalori nenani lama-carbohydrate.
Izinhlobonhlobo ze-anyanisi Inani lamagremu ku-1 XE Amakhalori ku-100 g
Luhlaza 280 4, 3
I-anyanisi 140 8, 5
Leek 160 7, 5
Bomvu 110 10, 9
Ikhalori ephezulu kakhulu uhlobo lwe-anyanisi olubomvu. Izimpaphe eziluhlaza zalesi sitshalo ziqukethe uhhafu wenani lama-carbohydrate kunezihlahla ezivuthiwe, kodwa futhi zinezinto ezingasizakali kangako.
Ukudla lo mkhiqizo ngaluphi uhlobo
Ukunaka! Ukuthosa u-anyanisi emafutheni onesifo sikashukela akwamukeleki! Le ndlela yokulungiselela inciphisa izakhiwo zayo eziwusizo futhi inyusa okuqukethwe kwekhalori yesitsha kufike ku-200 kcal.
Imifino eluhlaza ilimaza isisu nezindonga zemithambo yomlomo, ngakho-ke akufanele uyihlukumeze.
Ukuze ulondoloze izimfanelo ezisebenzayo zesitshalo futhi usenze singashisi kangako, sibhakwa kuhhavini. Ngemuva kokucutshungulwa okunjalo, kuba lula futhi kuthambile ekunambithekeni. Ukwenza lo mkhiqizo ngaphandle kokusebenzisa amanzi namafutha kuyindlela engcono yokuthola okuningi kuwo.
Ungabhaka kanjani u-anyanisi kuhhavini ukuze welashwe, bonke abantu abanesifo sikashukela kufanele bazi. Ungapheka le imifino ngaphandle kokuthosa, ufafazwe ngosawoti bese ubekwa ku-peel ku-skillet, ugcotshwe ngamafutha omnqumo, noma ugcwele ku-foil. I-anyanisi ikhasi ngesikhathi sokupheka alisusiwe. Kepha kukuhle kakhulu uma upheka u-anyanisi woshukela, njengokudla okugcwele.
Ezincwadini zokupheka, ungathola izindlela eziningi zokubhaka u-anyanisi ku-microwave yokwelashwa.
Recipe 1. Nge-thyme
5 anyanisi obomvu,
Ibhotela - amathisipuni angu-3-5,
Amaqabunga e-thyme entsha.
U-Thyme oqoshiwe nosawoti.
E-anyanisi, sinqume iziqongo bese usika ngokunqamula.
Faka usawoti nge-thyme ukusikeka. Faka uwoyela omncane ku-anyanisi ngamunye.
Bhaka ku-microwave imizuzu engama-35.
Recipe 2. Ngamantongomane nogalikhi
iphawundi le-anyanisi elincane
1 tbsp ama-walnuts,
2 amabhantshi kagalikhi,
imifino ye-cilantro ne-dill,
ukuluma. I-apula elingcono
Bhaka u-anyanisi, ngaphandle kokususa i-peel, ku-microwave ngaphandle kosawoti kanye nethosa. Ukulungela kunqunywa ukuthamba kwemifino.
Susa i-peel bese ubeka u-anyanisi obhakwe endishini.
Lungiselela ukugqoka. Ukuze wenze lokhu, gaya amantongomane negalikhi ku-grinder yenyama, engeza upelepele, ama-suneli hops, imifino eqoshiwe, imbewu yamapomegranate nosawoti.
Thela ukugqoka ngaphezulu kwesitsha esiphelile.
Mangaki ama-anyanisi ongawadla ngosuku?
Kwesinye isikhathi izazi zokudla okunempilo zithi ungadla u-anyanisi obhakwe ngesikhathi sokudla kwesibili. Ngakho-ke ungawuzwa umphumela wokwehla ushukela kulo mkhiqizo ngokugcwele.
Ukufaka umkhiqizo omusha ekudleni kuzosithinta kahle isimo somuntu onesifo sikashukela. Ngakho-ke, udinga ukudla u-anyanisi onesifo sikashukela nsuku zonke.
Ukuthi ukhetha yiphi ibanga
Gxila ezinhlotsheni ezikhula endaweni yangakini. Imifino emisha ihlala ingcono kunaleyo engenisiwe. Okuwukuphela kokuhluka kwezinhlobo ezibomvu, ezingagcini ngokuba nezakhiwo ezifanayo ezizuzisayo njeng anyanisi ojwayelekile, kodwa futhi ziqukethe i-iron eyengeziwe. U-anyanisi omusha futhi obhakwe uzuzisa kakhulu isifo sikashukela.
Akubalulekanga ukuthi ukhethe u-anyanisi wesifo sikashukela, into esemqoka ukuthi lo mkhiqizo usekudleni kwakho nsuku zonke.
Okubhakiwe futhi okusha (u-anyanisi, oluhlaza) u-anyanisi wesifo sikashukela
I-peas yesifo sikashukela: isetshenziswa kanjani kanye ne-contraindication
I-Barley nohlobo 2 sikashukela: izinzuzo, izindlela zokupheka, contraindication
Ngingakwazi ukudla imbewu yethanga nesithanga sikashukela?
Inyama yeJellied yesifo sikashukela - kungenzeka noma cha
Kungani i-Jerusalema artichoke inconyelwa uhlobo 1 noshukela 2
Ijusi yetamatisi yesifo sikashukela sohlobo 2: kungenzeka noma kungenzeki
I-Buckwheat kanye nesifo sikashukela: izinzuzo nezindlela zokupheka
I-Banana yesifo sikashukela - kungenzeka noma cha
Ngingakwazi ukudla i-cranberry yesifo sikashukela
Ngingakwazi ukusebenzisa i-rose rose yasendle onesifo sikashukela sohlobo 2
UStevia uswidi weshukela
Ukudla kwehlisa ushukela wegazi
I-chicory yesifo sikashukela sohlobo 2: izinzuzo kanye nokuphikisana
Ukudla okufanele kulandelwe isifo sikashukela sokukhulelwa + imenyu yansuku zonke
Ukuvunyelwa kwesifo sikashukela kuvunyelwe
Ithebula No. 5 - izinkomba, uhlu lwemikhiqizo + yemenyu
Ingabe Amatshe Angaba Nesifo Sikashukela?
Ushizi we-Cottage ushukela: izinzuzo, ukulimala nokupheka
Amafutha anesifo sikashukela - kungenzeka noma cha?
I-Glycemic Product Index (GI) - amatafula kwabanesifo sikashukela hhayi kuphela
I-anyanisi ebhakelwe ushukela: izici zokupheka, imigomo yokusebenza, ukusebenza ngempumelelo kanye nokubuyekezwa
Abantu ababhekene nesifo esifana nesifo sikashukela kufanele baqaphele impilo yabo futhi bazame konke okusemandleni abo ukwenza i-glucose yabo ejwayelekile ukuba yejwayelekile. Ngaphezu kokwelashwa okujwayelekile kwe-insulin, ungashintsha futhi izindlela zokupheka zabantu. Enye yezindlela ezisebenzayo zokulwa nalesi sifo se-endocrine u-anyanisi. Kuyaphawuleka ukuthi ngesikhathi sokwelashwa okushisa, noma ngabe kuyapheka noma kuyabhaka, akulahlekelwa yimpahla yakho enenzuzo.
Yiziphi izinzuzo zika-anyanisi abhakwe kashukela? Lokhu kuzoxoxwa ngakho esihlokweni.
Thayipha 1 no-Type 2 Diabetes
Ngaphambi kokuthola ukuthi u-anyanisi ophekwe kahle kanjani ushukela, ake sixoxe ngezinhlobo zalesi sifo.
Isifo sikashukela sohlobo loku-1 siyazalwa noma sitholakale sisencane.Ama-pancreas amisa ukukhiqizwa kwe-insulin, kanti namaseli e-beta abhekene nokukhiqizwa kwawo avele afe. Ukuphela kwendlela ukuphatha ukuphathwa kwe-insulin impilo yonke.
Isifo sikashukela sohlobo 2 sibizwa nangokuthi sitholiwe. Kwenzeka, njengomthetho, ebudaleni, esikhathini esiningi kakhulu kubantu abakhuluphele, kanye nakwizifo ezithile ezingalapheki zamanyikwe. Lolu hlobo lwesifo sikashukela lubonakala ngokuthi ukukhiqizwa kwe-insulin akuyeki, kepha kwenzeka kancane kangangokuba umzimba awunaso isikhathi sokusebenzisa wonke ushukela owutholile, ngenxa yalokho izinga lawo likhuphuka.
Izici zokudla nokudla
Lapho uhlanganisa imenyu yokudla, kubalulekile ukwazi ukuthi hlobo luphi lwesifo sikashukela umuntu analo. Ngakho-ke, kulabo abahlushwa isifo sikashukela sohlobo 1, akukho mithetho ekhethekile ezinhlotsheni ezahlukahlukene zemikhiqizo. Kuyadingeka kuphela ukwenza izibalo ezinembile zamayunithi we-insulin ekudleni ngakunye. Ukuze kungabikho amaphutha ekubalweni, kunenkomba enemibandela yokuthi "isinkwa unit". I-XE eyodwa ilingana ne-2 IU ye-insulin. Ngokuvamile, umuntu ongenazinkinga zokukhuluphala ngosuku udinga i-18-24 XE, esatshalaliswa phakathi kokudla usuku lonke.
Kuhlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2, umthetho osemqoka uwukulinganisela. Imvamisa, abathwali balesi sifo bahlushwa ukukhuluphala, ngakho-ke nje udinga ukulungisa ikhwalithi nenani lokudla bese ususa imikhiqizo eyingozi kwimenyu yakho. Iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2 zivame ukubekelwa amatafula wokudla uNo. 8 noma uNo. 9, leyo mikhawulo isiza ukunciphisa ukunciphisa nsuku zonke i-insulin futhi kunciphise isisindo.
Ngenxa yalokho ithini imiphumela yokwelapha?
Ukudla u-anyanisi obhakwe nesifo sikashukela, umuntu uthola:
Iodine, evamisa izinqubo ze-metabolic futhi isungule ukukhiqizwa kwama-hormone.
IGlyconin - inesibopho sokunciphisa ushukela wegazi.
Amavithamini kanye namaminerali alungisa izinga likashukela ku-serum yegazi, kanye nokwandisa ukusebenza kahle kwamasosha omzimba. Phakathi kokunye, i-fiber, amafutha, amaprotheni nama-carbohydrate, kanye namanzi, akhona ku-anyanisi.
Kungani kusekuhle ukudla u-anyanisi obhakwe kashukela? Izakhi ezisemqoka zemifino zihlanganiswa ngesibabule, esuselwa ku-amino acid ebizwa nge- cysteine. Ngenxa yabo, u-anyanisi unamandla okwenza okuthile kushukela. Emzimbeni womuntu, le nqubo yenzeka kanjena: ama-pancreas akhiqiza i-insulin, emva kwalokho ihlangana ne-glucose bese yathunyelwa kumaseli ukuze ifinyelele kuma-tubules. Umphumela walezi zenzo ukufakwa koshukela esitokisini, kanye ne-insulin egazini. Ama-Receptors kumabhuloho e-disparide, nawo u-anyanisi nawo, abhubhisa lokhu okugcina, ngenxa yalesi sikhathi samandla okuphendula kutholakala, ngoba i-anyanisi ethe xaxa iyenyuka, amathuba aphakama okuthi insulin yakhele egazini ngaphandle kokuwa ngaphansi kokulimaza kwama-receptors.
Kodwa-ke, noma kunjalo, ukwelashwa kwesifo sikashukela ngama-anyanisi abhakwe kungenzeka kungabi yodwa. Umphumela uzovela kuphela lapho uthola ukwelashwa kwe-insulin nangokudla okufanele. Futhi ungenzi izinqumo ngokwakho! Qiniseka ukuthi uthintana nodokotela wakho.
Uhlobo luni lweshukela ongabhaka u-anyanisi nalo?
Kulokhu, akukho okuphikisana, ngoba u-anyanisi obhakwe onesifo sikashukela sohlobo 2 angadliwa ngendlela efanayo nohlobo loku-1 lwalesi sifo. Isibabule esikulesi sihlahla senza kusebenze ukukhiqizwa kwe-insulin futhi kukhulisa ukusebenza kahle kwezindlala zokudla.
Ingabe u-anyanisi obhakwe uyasebenza ngempela kushukela? Ukubuyekezwa kwabantu abaningi abazame ukwethula le mifino ekudleni kwabo kulungile. Babona ukuthi isifiso sabo sokudla kanye nokugaya ukudla sekuthuthukile, izinkinga zokuqunjelwa kanye nokwenyuka kwamathumbu okwenzeka kancane kancane, sebengasakwazi ukugula, ngoba ukudla u-anyanisi obhakiwe kukhulisile ukumelana nomzimba. Kuyaphawuleka futhi ukuthi lapho kudliwa u-anyanisi obhakwe, ibhalansi le-usawoti lamanzi lifinyelela emavikini angama-3-4 futhi izinga likashukela wegazi liyehla kancane kancane liye esimweni esejwayelekile.
Izeluleko Ezilusizo Mayelana Nama-anyanisi abhakwe
Kungabonakala kwezinye iziguli ukuthi kunzima kakhulu ukuphathwa ngale ndlela ngenxa yokunambitheka okuthile, kepha eqinisweni, u-anyanisi obhakwe ubumnandi futhi unephunga elimnandi. Ngokubhaka, kungcono ukhethe u-anyanisi ophakathi nendawo. Kukholelwa ukuthi le mifino iqukethe inani lezimanga lezimanga. Ngokuyisisekelo, anyanisi alungiswa ngezindlela ezimbili - abhaka noma anyanisi wonke noma bawasika izingcezu ezinkulu. Ungapheka u-anyanisi obhakwe zombili kuhhavini naku-microwave, kubalulekile kuphela ukukhetha izinga lokushisa elifanele bese usetha isibali sikhathi ukuze imifino ibiliswe, ingagcotshwa.
Manje usuyazi ukuthi ama-anyanisi abhakwe alusizo kangakanani kushukela. Ungabhaka kanjani lo imifino ukuze ube nokunambitheka okuhle kakhulu? Okwamanje, kunezindlela eziningi zokupheka ongakhetha noma yikuphi ngokubona kwakho, ukuze u-anyanisi ungabi isasasa manje. Sincoma izinketho eziningi zokubhaka u-anyanisi:
Udinga ukuthatha u-anyanisi o-5 ophakathi, i-sunflower noma i-olive yamafutha kanye ne-ingcosana kasawoti. Cwecwa bese usika imifino ibe izingxenye ezine, gcoba kancane ngamafutha nosawoti. Faka konke epanini noma endishini yokubhaka bese uyimboza nge-foil ngaphezulu. Pheka isigamu sehora.
Kuthathwa u-anyanisi omkhulu, ugezwe ngaphansi kwamanzi agobhozayo, kodwa ungabilisiwe bese ubhaka kuhhavini imizuzu engama-20-30. Kuyaqapheleka ukuthi ngokudla imifino ebhakwe ngale ndlela, unganciphisa kakhulu izinga likashukela ezinsukwini ezimbalwa.
Kuvela futhi ukuthi yi-anyanisi emnandi kakhulu ebhakwe ngesifo sikashukela ku-microwave. Ukuze wenze lokhu, thatha imifino bese uyicwilisa kusuka kukisi. Sula u-anyanisi wonke ku-microwave imizuzu engama-3-7, ngokuya ngosayizi wawo. Imifino izothambile, ngeke kube khona iphunga elibi nelusizi. Bancoma ukudla u-anyanisi ongu-1 ngosuku, kungakhathalekile isikhathi sosuku.
I-anyanisi ingukudla okuwusizo kakhulu kwezifo eziningi nodokotela osemqoka wesifo sikashukela. Ingasetshenziswa kokubili okuluhlaza nokubunjiwe. Kodwa-ke, noma kunjalo, ngaphambi kokuqala ukwelashwa nge-anyanisi ebhakwe, udinga ukubonana nodokotela, ngoba, yize zikhona zonke izinzuzo zako, kubekelwa kuzo iziguli ezinesifo esithile esibuhlungu nesingamahlalakhona sepheshana lesisu.